トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Normal raharaham-barotra tamin'ny fotoana ny sehatra hisafidy dia pachinko trano izy
Jereo ny mba hahazoana antoka handao ny sehatra iray dia azo tantara fa, mba hisorohana ny simbasimba ny fampiasam-bola, tahirin-kevitra sy fantsika no toerana tianao ho hita. Ao, ao ny latabatra hisafidy tamin'ny fotoana ara-dal?na raharaham-barotra isika dia hijery ny fomba tsara aho misafidy ny sehatra izy ireo rehefa misy anjara. Voalohany, isika dia hijery ny tahirin-kevitra.
izany, arakaraka ny fotoana mba hitsidika, rehefa hahita ny tahirin-kevitra, dia mila mandinika ny soso-kevitr'izy ny zava-misy fa ara-dal?na ny andro raharaham-barotra. Tamin'ny andro raharaham-barotra ara-dal?na, satria tsy misy mandeha ny hametraka ny pachinko lafiny efi-trano, fotsiny satria mafy ny andro teo aloha, dia nijanona tsara kokoa izay tsy ho avy hatrany nipetraka.
eo amin'ny latabatra izay tamin'ny andro teo aloha, raha Hianao no isan'ny fotoana ary inona no lafiny hira ny Atari sy ny isan'ny revolisiona ny andro no zava-dehibe. Ary tonga ny andro tany aloha, tsara ihany koa ny revolisiona maro mijoro ny andro, ka mety fa ny andro aloha sy ny fantsika Tsy miova. Ankoatra izany, na dia tsy misy tightened Inochikugi, fihantonan-javatra mandalo baolina mandra-fanombohan'ny induction fantsika, dia mety ho tightened.
jiro izao ny tahirin-kevitra, dia misy ihany koa ny karazana rotational hafainganam-pandehan'ny ka namely ny miseho. Hatramin'ny iray amin'ireo hira be, tsy mitsahatra ihany koa ny hahazoana antoka fa ny haben'ny izay fihodinan'ny. Andro vitsy mahery, mendrika isan'ny rotations ny andro, ary raha ny hira ny fikorianan'ny dia nitsahatra, ary azo inoana fa tsy anarana, dia ny hoe misy ny zava-dehibe ho namely tamin'ny fotoana ara-dal?na raharaham-barotra. Raha
Horukon handeha hiaraka CR milina mikendry ny ho nandany ny fivarotana, mamaky toy ny fahazarana, toy ny alon-tarika sy ny fanahafana ny Horukon ROM, misafidy ny mety hiditra ny mahery hitsangana-fiainana izao. Raha
ny olona izay te-handresy tapaka ao Hanemono, satria ny fantsika fanitsiana dia mizara ny vokatra, dia ho hita eo afovoan 'ny fantsika.
Na izany aza, na dia ny angon-drakitra mba matanjaka, raha hita fa na tsy mafy ny fantsika, ka mafy ny induction fantsika Tsy soso-kevitra fa toy izany fampiasam-bola be. Ny jiro toy izany, satria mihena ny payout dia haingana kokoa, ary rehefa mamely, dia nanolorana azy ho hanoloana tsara sy ny zavatry ny voapaika.
Ankoatra izany, na dia misy hira na dia amin'ny andro, tsara be dia be ny hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny Na raha tsy izany, eo izany no toetry ny hafainganan'ny rotational fihetseham-po mety ho midina dia, mihevitra aho fa tsara kokoa ny hifindra ho faty avy hatrany. Ankoatra izany, fantsika fanitsiana tamin'ny fotoana ara-dal?na dia lasa raharaham-barotra ara-dal?na fantsika ny toeram-pivarotana. Raha tsy mahatsiaro
ny toetry ny fantsika, satria ny fantsika ny fanjakana tamin'ny andro fanafahana na rehefa lasa ny famerenana unreadable, Ataovy fijery tsara. Nail ara-dal?na afa-tsy vitsy dia millimeters ny fiovam-po tahan'ny, tonga ny fahasamihafana. Mba jereo ny fantsika no mora ny manavaka ny sehatra mikendry indrindra ny maso, fa na iza na iza tsy tiany hanavaka mora foana isika, dia ho hanazava amin'ny rotational hafainganam-pandeha. Raha ny teny ao amin'ny
isan'ny revolisiona, ao amin'ny pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny 3,5 Yen fifanakalozana, tokony ho 13 in-in arivo Yen, tokony ho in-15 ao amin'ny 3 Yen fifanakalozana, tokony ho 17 heny amin'ny 2,5 Yen fifanakalozana, ary ny 20 in-in 2.3 Yen fifanakalozana izany izao no. Ny sasany fiovaovana eo amin'ny modely sy mety, mazava ho azy, fa izany no isan'ny rotations eo ho eo isaky ny alina Yen Raha manana ara-dal?na fanitsiana fantsika. Be na tsy hibebaka izy, dia mety hieritreritra, fa izany no zava-misy.
eo amin'ny raharaham-barotra ara-dal?na, ny zava-misy fa manokatra ny hihavian'ny fihantonan-javatra, satria efa ho no, miezaka ny hifidy ny sehatra izay mampibebaka ny fara fahakeliny, mitovy amin'ny vola tahan'ny araka ny isan'ny revolisiona. Na izany aza, dia tsy ampy namely Yen arivo amby iray alina. Satria ianao dia ho uneven eo amin'ny fikorianan'ny ny baolina, amin'ny alalan'ny nalentiny, fara fahakeliny, maro arivo Yen, dia afaka milaza amin'ny antonony hamantatra ny fikajiana ny eo ho eo ny isan'ny revolisiona. 3 Yen fifanakalozana lasa tokony ho in-20. Ny sasany fiovaovana eo amin'ny modely sy mety, mazava ho azy, fa izany no isan'ny rotations eo ho eo isaky ny alina Yen Raha manana ara-dal?na fanitsiana fantsika. Be na tsy hibebaka izy, dia mety hieritreritra, fa izany no zava-misy.
eo amin'ny raharaham-barotra ara-dal?na, ny zava-misy fa manokatra ny hihavian'ny fihantonan-javatra, satria efa ho no, miezaka ny hifidy ny sehatra izay mampibebaka ny fara fahakeliny, mitovy amin'ny vola tahan'ny araka ny isan'ny revolisiona. Na izany aza, dia tsy ampy namely Yen arivo amby iray alina. Satria ianao dia ho uneven eo amin'ny fikorianan'ny ny baolina, amin'ny alalan'ny nalentiny, fara fahakeliny, maro arivo Yen, dia afaka milaza amin'ny antonony hamantatra ny fikajiana ny eo ho eo ny isan'ny revolisiona.